DFS oo digniin u dirtay siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin ku howlan fashilinta dedaalada RW Rooble.
May 2, 2021 Xuseen 9
Aad baan u bogaadinahayaa DGNIINTAN loo diray midawga murashixiinta 4ta degmo!
Waxa kale oo aan wasiirka koowaad u sheegi lahaa in SHIRQOOL WEYN Muqdisha laga wado; midawga 4ta degmo (the vilaage gangs) doorasho uma socdaan ee dagaal bay abaabulayaan oo weli waxa ay ku hawlanyihiin, sida aad ka dhawaajideenba, kala furfurka ciidamada iska daa in ay dib u celiyaane.
Anigau markii ay arrintu maraysay SHIIRKOLE, baan iri hadda halla iska gaaro, haddii kale DHIIRIGELIN bay waxa ay u noqonaysaa in kooxo kale ay aagag kale xirtaan oo sidaa dawladnimadii la dhoob-dhoobayey ku budhbudho oo si sahal ah dagaal ku qarxo oo kuna fido magaalada.
Haddaba, taas xukuumaddu way ka gaabiday ee maanta haka gaabinina in aad arrinkan ciidamada sida ugu dhakhsiyaha badan go’aan uga gaadhaan. Waa in aad, jaalle ra’iisal wasaare, tuurtaa tusbaxa oo tuute gashataa. Wax farqiya oo u dhaxeeya malaha iyaga iyo UGUS, waayo sabab ay hadda magaalada ugu sii jiraan ma muuqato aan ka ahayn burburinta dawladnimada. Sidaa daraadeed, waa maxay farqiga iyaga iyo UGUS u dhaxeeya?
Gunaanadkii, inta aan 20ka bisha laggaarin waa in ay magaaladu dawladda gacanta ugu jidhaa, haddii kale maxaa doorashooyin laga shiraa haddii magaaladiiba ay jabhado idinka haystaan. Ma waxa aad sugaysaan in madaxtooyada la idiin kugu soo galo?! Sidaa daradeed, Jaalle ra’iisal wasaare, tuute qaado inya indhaha shidatid AMA jabhadaha ciidamada aayar-aayarka idinkala wareegaya kuwareejiya xukunka oo iska taga. Suubaa salaax danbe maharin oo meeshan kama muuqdo; waa sida dadbadani u arkaan; shaashad danbe calaacal halla soo fariisanina.
Kkkkkkk ninka la baxay hillaac waxaan dhihi lahaa sxb xamar sharci ayuu farmaajo ku joogay isagaana sharcigii god madoow ku riday, waqtigiina waa ka dhammaaday farmaajo iyadoo ay sidaa tahay ayaa loodulqaatay afwanaahsanna lagula hadlay iyadoo la xeerinayo in aanu dalka buburin sida ii muuqatana adiga iyo isaga isku caqli baa tihii meeshu waa xamar hawiya dhaggan loogamana adkaan karo, farmaajo waxbo faraha uguma jiraan ciidankii uu ku tashanayey qabiilkoodii ayeey raaceen, waddo aan dagaal ahaynna ma furna farmaajo waa wax ma garato wuxuuse runta ogaanayaa marka darbiga laga daato qoortana la soo qabto isagoo qayilaya shiishadna cabbaya kkkkkkk sxb bal intaas gaarsii
Waar yee Caliyoow, dee, aflagaadada jooji; miyaadan ilma xalaal ahayn?
Dee anigu laba uun baan iri: Ragga xukuumadda horboodayoow, idinkaa xukunka doontaye, raggan idiin hilba qalanaya ee idiin soo gurguuranaya ee marba xayn idinka dareersanaya ee marba taako idinku soo sinqaya, ha eeganina ee ama iska dhiciya ama xukunka ku wareejiya. Wax doorasho layidhaahi majidho, xaaladdu waa dagaal. Niicbay kolba shaashadda la soo fadhiisanayaan. Waar QOOTO-QOOTO waa soo dhammaatay.
Kkkkk qaswadayaal qoorta ayaa lasoo qaban wixii dhaca oo dhintana farmaajo bari buu ka yahay . Waxaa la oran rooble ayaa amray xasuuqa mucaaradka. Dabadeed rooble waa labadali farmaajo midkale ayuu keeni kkkk shaxda nabad iyo nolol wali caano nuugyada ma ay garan. Ee waa digniin mucaaradow bacdaada dollar dhuuqso . Kkkk
Ini fargaajo xamar wuxuu ku joogaa inan layaalnimo iyo qaar ka hoose ee Saynab Macalin. Rooble la helow caqli iyo xigmad toona mahayo waayo ciidamo is dilay oo xabad isla dhacay ayuu leeyahay xero kuwada laabto waxba kama yaqaan ciidan iyo hoelihiisa. Rooble waa inuu shaqada ka cayriyaa taliyetaasha ciidamada sida kan xooga, Police ka iyo nabad sugida una magacaabaa taliyeyaal isu keeni kara ciidanka oo dhex dhexaad ah , sidoo kale waa inuu ini fargaajo ka cayriyaa Villa wardhiigley kuna yiraahdaa Xalane masoo dhaafi kadhid. Wixii aan intaa ahayn waa fashil iyo foolxumo xamar na dagaal faraha looga gubto hurimayso.
Onkod, xaal iyo raalligelin baa lagaa rabaa. Maxaa kuu geeyey dumaashidaa qaarkeeda hoose?! Waar Dhabayacadu illeen ma xishooto. Ninkaa haddaad wax odhanayso isaga la hadal, laakiin waa ceeb in aad marwooyinka rifto; waar waa maxay wuxu, mmala dukaato. Jawaab degdeg ah baan kaa rabaa.
DAAR – OOD MADAXNIMADA SOOMAALIYEED HA ISKA DHAAFAAAN, HADDI FIIRI
1- M S BARRE
2- CABDILLHAI YUUSUF
3- CABDI ILEY
HADDA FARMAAJO AYAA DOOBINAYA OO BAD ISKU GALEY
War ninkii Marexan wali meeshii joogaa.Dhabayacana walk maseyr bay ku maqan yihiin 17.09.2021 wax laga bedelayaa ma jiraan doorasho iyo nin kastaa nasiibkiis.